Actorylọ Ọrụ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu - China Sports Gloves Manufacturers, Aid
Mepee azụ uwe
Handtọ aka dị mma maka onye ọ bụla hụrụ ihe egwuregwu n'anya n'èzí dịka ịgba ígwè, ịgba ígwè, ịnya ụgbọ ala, ọgba tum tum, mgbatị, ịrị ugwu, ịnya ụgbọ mmiri, ịnya ụgbọ mmiri, ịkụ azụ, ịnya ụgbọ mmiri, na ịgba. Ogbo ahihia ndu nke uzo ergonomic na-echebe nkwụ. Mgbanwe, ike, na-abawanye nkasi obi mgbe ị na-arụ ọrụ. Chebe nkwonkwo aka na aka, zere mmerụ ahụ na oghere.
Nchịkwa mmanụ a silụ silicone na-egbochi nkụ, dị mma, na-emenye ụjọ. Mpempe ikuku na-efe efe na azụ maka ịdị mma, iku ume na mgbanwe mgbanwe. Ọkpụkpụ aka-aka nke aka ya, isi mkpịsị aka ya na njị ike nwere ike gbagọrọ agbatị. P jiri ihe mkpuchi na-ekwe ume, nwere ike ichebe gị pụọ na mmerụ aka. Mgbatị aka na-agbatị agbatị agbatị, Velcro tapawa siri ike. Ire gbatịrị maka ịdị mfe.
A na-eme akụkụ nkwụ karịa na uwe aka nkịtị, akụkụ aka aka gị bụ iji aka na-ejupụta iji nyere gị aka ịchebe karịa. A na-eji akpụkpọ anụ nwere akwa dị elu na akwa na -eme ihe n'azụ aka, na-eme ka aka gị kpọọ nkụ na iku ume iji zere ịdọrọ aka. Afọ latex enweghị ọnụ dị nro ma dịkwa mma, na-eme ka ike nke ukwu.